Hevitra mandalo Resaky ny mpitsimpona akotry: tena izy sa fihetsiketsehana fotsiny ? | NewsMada
Hevitra mandalo Resaky ny mpitsimpona akotry: tena izy sa fihetsiketsehana fotsiny ?
Par Les Nouvelles sur 21/08/2018
Mandraingiraingy tato ho ato ireo andian-jiolahy ahiahiana ho mpanatanteraka ny fakana olona an-keriny hatakalo vola. Ao ireo heverin’ny mpitandro filaminana izay efa nitsongo dia azy ho eo am-panomanana ny asa ratsy atao hoe kidnapping. Tapitra teo amin’ny fifandonana ny ain’ny sasantsasany tamin’ireo olon-dratsy. Maro koa ivelan’izany ireo olona azo heverina fa mpikambana ao amin’ny tambajotran’ny kidnapping no noraofin’ny mpitandro filaminana mba ahafahana manao famotorana an’ireo andiana tontakely tsy manana famindram-po rehefa mahazo. Gaga ihany ny mponina mahita ny hakingan’ny polisy sy zandary rehefa ilaina izany. Moa ve hatramin’izay dia tsy nilaina ny fanenjehana an’itony jiolahy itony izay toy ny nanaram-po be ihany? Rehefa nanindry bokotra tamin’ny hetsika mahery vaika ny fikambanana iraisam-pirenena noho ny hamaroan’ny olona mitondra ny zon’ny firenena any ivelany tratry ny fakana an-keriny, dia taitra ny manam-pahefana eto an-toerana ka nanontsikontsina an’izao tobin-jiolahy rehetra izao dia iny no vokany.
Mbola misy ihany anefa ny olona eto amin’ny fiaraha-monina no tsy resy lahatra. Milaza izy ireo fa fomba fampiresahana ny mponina fotsiny izany. Raha tsy mbola misy ny filazana ny fihavian’ireo fitaovam-piadina mahery vaika izay mitovy amin’ ireo fitaovana ampiasain’ny herim-pirenena samihafa. Misy marika sarotra vonoina ireny fitaovana ireny afaka ahafantarana hoe iza ny toby nampiasa azy ireo. Mbola tantara mitohy hatrany koa anefa, raha mbola ny irakiraka no tra-tehaka fa ireo atidoha mpikotrika an’itony asa manimba ny mponina sady mitarika laza ratsy any amin’ny firenena any ivelany, mbola miriaria. Mbola hitohy ary mety hitombo an’isa mihitsy ny fampihorohoroana avy amin’ny fanaovana an’izany.
Mampiteny irery ireto trangan-javatra mitarika fahasahiran-tsaina sy vatana, ny sasany tsy fantam-pototra (kidnapping) ny hafa tsy hita fiafara (halatra taolam-paty). Toy ny hoe mifono misitery ny fisian’izy ireny. Hatramin’ny ity ny androany dia mbola tsy nisy nahavita ny famakiana bantsilana ny zava-miafina ao ambadiky ny famakiana fasana sy ny fangalarana ny taolana.
Vitsy anefa ny olona resy lahatra amin’ny filazana hoe voafitaka avokoa na ny mpamaky fasana na ireo mpangalatra taolana, ary tsy misy na antsokosoko aza ny tsena ahafahana mandafo taolana. Mahafantatra ny fisian’io raharaha mamoafady io ve dia tsy hahalala fa tsy misy lalam-barotra ho an’izany eto?